ချစ်သူအမျိုးအစားအလိုက် ပေးသင့်တဲ့ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ - For her Myanmar
ကဲ ယောင်းတို့ ခရစ္စမတ်စ်လည်း နီးလာပြီဆိုတော့ ခရစ္စမတ်စ်လက်ဆောင်လေးတွေလိုချင်နေကြပြီဟုတ်? (ယောင်းတို့ရဲ့ အိုပါးလည်း ဘာပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ ခေါင်းမီးတောက်နေလောက်ပြီ ငိငိ။) မပူပါနဲ့။ ယောင်းစိန်လာပါပြီ။ ကဲ ယောင်းတို့ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေရေ။ လက်ဆောင်မပေးခင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးက ဘယ်လိုအမျိုးအစားထဲ ပါလဲကြည့်ရပါမယ်။
ယောင်းစိန်ကတော့ အဓိက ချစ်သူကောင်မလေး (၆)မျိုးလို့ ခွဲလိုက်ပါတယ်။
(၁) အစားတစ်လိုင်း ချစ်သူ
ကိုယ့်ချစ်သူက အစားချည်းပဲ တစ်လိုင်းဆိုရင်တော့ ချောကလက်လေးတွေထည့်ထားတဲ့ ဘူးလှလှလေးတစ်ဘူး လက်ဆောင်ပေးပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သူအကြိုက်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်မှာ ကြိုတင် ဘွတ်ကင်ယူထားပြီး သူကြိုက်တတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကို ကြိုတင်မှာထားပေးလိုက်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အိမ်ကနေ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လာတဲ့ အစားအသောက်တစ်ခုကို သူမကို ကျွေးပါ။ (ဒီအချိန်ကျ လက်ရာကောင်းမကောင်းဆိုတာထက် မေတ္တာစေတနာက ပိုအရေးပါတယ်လေနော့။ )
သတိထားရမှာက အစားတစ်လိုင်းတွေကို သွားပြီး အလှအပတွေ ဘာညာ စပရိုက်စ်မတိုက်နဲ့ရယ်။ ကြိုက်ပု သူတို့က။ ဟီး စပရိုက်စ်က စားလို့မှမရတာ။ 😛
Related Article >> သင့်ကောင်မလေးကို အံ့အားသင့်စေမယ့် လက်ဆောင်များ
ကဲ ဒီလိုချစ်သူမျိုးဆိုရင်တော့သူ(မ) သဘောကျတတ်တဲ့ spa လေးတွေမှာ လုပ်ဖို့ package လေးဝယ်ပေးထားတာမျိုး၊ သူ(မ)နဲ့လိုက်မယ့် အင်္ကျီလက်ဆောင်လေးပေးတာမျိုးပေးကြည့်ပါ။
ဒါမှမဟုတ် သူ(မ)အတွက် ခေါင်းစီးကြိုးလှလှလေးတွေ၊ ကလစ်လှလှလေးတွေ ပါတဲ့ ဘူးလေးတစ်ဘူးလက်ဆောင်ပေးပါ။ (ဘယ်မှာ ဝယ်ရမယ်မှန်းမသိရင် Spirit တို့ MGOU တို့ Miniso တို့မှာ သွားရှာကြည့်ပါ။ တော်တော် အစုံရှိပါတယ်။)
ဒါမှမဟုတ် သူ(မ) မှာ ကုန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဘက်ဂျက်များရင်များသလောက် တခြားပစ္စည်းလေးတွေပါ ထည့်ပေးချင်ရင် ရသေးတယ်နော်။
လက်သည်းနီ ခရေဇီဆိုရင်လည်း လက်သည်းနီဘူးလေးတွေပါ ထည့်ပေးလိုက်နော်။
ကိုယ့်ချစ်သူက စပရိုက်စ်ကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ်က စပရိုက်အချိုရည်တောင် မသိတဲ့သူဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ပြောပြမယ်။ For Her Myanmar Club မှာ ချစ်သူနာမည်နဲ့ Member လေး ဝင်ပေးထားလိုက်။ သူသာ မန်ဘာဝင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် လကုန်ကျ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလေးတွေ၊ accessories လေးတွေ စတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါတဲ့ လက်ဆောင်စပရိုက်စ်ဘူးလေး သူရလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် စပရိုက်စ်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ အက်မင်မမတွေက ဘူးထဲမှာ ဘာတွေပါမယ်ဆိုတာ ကြိုမပြောထားဘဲ လကုန် လက်ဆောင်ဘူးရတော့မှသိတာဆိုတော့ စပရိုက်စ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ Her Club ကလုပ်မယ့် ပွဲလေးတွေကိုလည်း သူတက်ခွင့်ရဦးမှာရယ်။
နောက်တစ်ခုက သူ(မ) အတွက် စိတ်ခွန်အားတက်စေမယ့် စာတွေကိုလည်း ဖတ်ခွင့်ရဦးမှာ။ အဲ့တော့ ကိုယ်လည်း အကြံမအိုက်တော့ဘဲ ချစ်သူကို စပရိုက်စ်တိုက်နိုင်ပြီပေါ့။
Related Article >>> လက်ဆောင်ပေးတတ်သူ အမျိုးအစား (၆)မျိုး
ရိုမန့်စ်ကြိုက်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ အလှဆုံး ပန်းစည်းလေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
သူနဲ့ကိုယ့်ပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြီး စာအုပ်လှလှလေးမှာကပ်၊ အမှတ်တရရှိခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေရဲ့အောက်မှာ စာသားလေးတွေကို လှလှလေးရေးပြီး ပေးလည်းရပါတယ်။ (စာအုပ်လှလှလေးတွေ ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမသိရင် လှည်းတန်းက D-mate ဆိုင်မှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့။)
ဒါမှမဟုတ် သူ့အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ ဆွဲကြိုးလေးတွေ၊ ခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတာလေ ကျောက်တုံးပေါ်မှာ ပုံလေးတွေရိုက်တာမျိုး၊ ခွက်ပေါ်မှာ သူ(မ)ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ထားတာမျိုးဆို သိပ်သဘောကျတာ။
ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးက အရမ်းအလုပ်ကြိုးစားလွန်းလို့ အလုပ်တွေမတရားများနေတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သူ(မ) အေးအေးဆေးဆေး အနားယူအပန်းဖြေလို့ရမယ့် နေရာလေးတွေမှာ
ဘွတ်ကင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ အနားယူလို့ကောင်းတဲ့ နေရာတွေကတော့ ချွေးထုတ်ခန်းတို့ဘာတို့ပေါ့။
ဒါမှမဟုတ်လည်း Massage (အနှိပ်ခံလို့ကောင်းတဲ့ တစ်နေရာရာမှာ) ဘွတ်ကင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်လည်း သူ(မ) အလုပ်လုပ်ရင်း မျက်စိညောင်းတဲ့အခါခပ်ဖို့ မျက်စဉ်းလေး ဝယ်ပေးပါ။
ဒါမှမဟုတ် သူ(မ) ပင်ပန်းတာ သက်သာစေမယ့် အင်နာဗွန်စီဆေးဘူး (သို့) အော်ရာမင်စီဆေးဘူးမျိုးလေး လက်ဆောင်ပေးပါ။
စာမှစာဖြစ်နေတဲ့ ချစ်သူကိုတော့ သူ(မ) ကြိုက်တတ်တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ဝယ်ပေးပါ။ သူ(မ)မှာ ရှိမရှိတော့ အရင်ဆုံး ဒိုင်လျှိုလေးစုံစမ်းကြည့်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ သူ(မ) လေ့လာနေတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်မျိုး၊ ပစ္စည်းမျိုးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် မှတ်စုစာအုပ်လှလှလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဘောပင်လှလှလေးတွေ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်း သေးသေးလှလှလေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ လက်ဆောင်ဘူးတွေ ပေးကြည့်ပါ။
ကဲ ယောင်းစိန်ကတော့ အိုင်ဒီယာလေးတွေ ပြောပြီးပြီနော်။ ကိုကိုမောင်မောင်တွေကို လက်သာတို့လိုက်တော့။
ကဲ ယောငျးတို့ ခရစ်စမတျဈလညျး နီးလာပွီဆိုတော့ ခရစ်စမတျဈလကျဆောငျလေးတှလေိုခငျြနကွေပွီဟုတျ? (ယောငျးရဲ့ အိုပါးတှလေညျး ဘာပေးရမလဲဆိုပွီးတော့ ခေါငျးမီးတောကျနလေောကျပွီ ငိငိ။) မပူပါနဲ့။ ယောငျးစိနျလာပါပွီ။ ကဲ ယောငျးတို့ရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးတှရေေ။ လကျဆောငျမပေးခငျ အရငျဆုံး ကိုယျ့ခဈြသူကောငျမလေးက ဘယျလိုအမြိုးအစားထဲ ပါလဲကွညျ့ရပါမယျ။
ယောငျးစိနျကတော့ အဓိက ခဈြသူကောငျမလေး (၆)မြိုးလို့ခှဲလိုကျပါတယျ။
(၁) အစားတဈလိုငျး ခဈြသူ
ကိုယျ့ခဈြသူက အစားခညျြးပဲ တဈလိုငျးဆိုရငျတော့ ခြောကလကျလေးတှထေညျ့ထားတဲ့ ဘူးလှလှလေးတဈဘူး လကျဆောငျပေးပါ။
ဒါမှမဟုတျရငျလညျး သူအကွိုကျဆုံး စားသောကျဆိုငျမှာ ကွိုတငျ ဘှတျကငျယူထားပွီး သူကွိုကျတတျတဲ့အစားအသောကျတှကေို ကွိုတငျမှာထားပေးလိုကျပါ။
ဒါမှမဟုတျရငျလညျး ကိုယျကိုယျတိုငျ အိမျကနေ ခကျြပွုတျပွငျဆငျလာတဲ့ အစားအသောကျတဈခုကို သူမကို ကြှေးပါ။ (ဒီအခြိနျကြ လကျရာကောငျးမကောငျးဆိုတာထကျ မတ်ေတာစတေနာက ပိုအရေးပါတယျလနေော့။ )
သတိထားရမှာက အစားတဈလိုငျးတှကေို သှားပွီး အလှအပတှေ ဘာညာ စပရိုကျဈမတိုကျနဲ့ရယျ။ ကွိုကျပု သူတို့က။ ဟီး စပရိုကျဈက စားလို့မှမရတာ။ 😛
Related Article >> သငျ့ကောငျမလေးကို အံ့အားသငျ့စမေယျ့ လကျဆောငျမြား
ကဲ ဒီလိုခဈြသူမြိုးဆိုရငျတော့သူ(မ) သဘောကတြတျတဲ့ spa လေးတှမှော လုပျဖို့ package လေးဝယျပေးထားတာမြိုး၊ သူ(မ)နဲ့လိုကျမယျ့ အင်ျကြီလကျဆောငျလေးပေးတာမြိုးပေးကွညျ့ပါ။
ဒါမှမဟုတျ သူ(မ)အတှကျ ခေါငျးစီးကွိုးလှလှလေးတှေ၊ ကလဈလှလှလေးတှေ ပါတဲ့ ဘူးလေးတဈဘူးလကျဆောငျပေးပါ။ (ဘယျမှာ ဝယျရမယျမှနျးမသိရငျ Spirit တို့ MGOU တို့ Miniso တို့မှာ သှားရှာကွညျ့ပါ။ တျောတျော အစုံရှိပါတယျ။) ဒါမှမဟုတျ သူ(မ) မှာ ကုနျတော့မယျဆိုတဲ့ မိတျကပျပစ်စညျးလေး လကျဆောငျပေးလိုကျပါ။ ကိုယျဘကျဂကျြမြားရငျမြားသလောကျ တခွားပစ်စညျးလေးတှပေါ ထညျ့ပေးခငျြရငျ ရသေးတယျနျော။
လကျသညျးနီ ခရဇေီဆိုရငျလညျး လကျသညျးနီဘူးလေးတှပေါ ထညျ့ပေးလိုကျနျော။
ကိုယျ့ခဈြသူက စပရိုကျဈကွိုကျပမေယျ့ ကိုယျက စပရိုကျအခြိုရညျတောငျ မသိတဲ့သူဆိုရငျတော့ နညျးလမျးကောငျးလေး ပွောပွမယျ။ For Her Myanmar Club မှာ ခဈြသူနာမညျနဲ့ Member လေး ဝငျပေးထားလိုကျ။ သူသာ မနျဘာဝငျဖွဈသှားမယျဆိုရငျ လကုနျကြ မိတျကပျပစ်စညျးလေးတှေ၊ accessories လေးတှေ စတဲ့ပစ်စညျးလေးတှပေါတဲ့ လကျဆောငျစပရိုကျဈဘူးလေး သူရလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့ စပရိုကျဈဘူးလို့ပွောလဲဆိုတော့ အကျမငျမမတှကေ ဘူးထဲမှာ ဘာတှပေါမယျဆိုတာ ကွိုမပွောထားဘဲ လကုနျ လကျဆောငျဘူးရတော့မှသိတာဆိုတော့ စပရိုကျဈဖွဈတာပေါ့နျော။ ပွီးတော့ Her Club ကလုပျမယျ့ ပှဲလေးတှကေိုလညျး သူတကျခှငျ့ရဦးမှာရယျ။
နောကျတဈခုက သူ(မ) အတှကျ စိတျခှနျအားတကျစမေယျ့ စာတှကေိုလညျး ဖတျခှငျ့ရဦးမှာ။ အဲ့တော့ ကိုယျလညျး အကွံမအိုကျတော့ဘဲ ခဈြသူကို စပရိုကျဈတိုကျနိုငျပွီပေါ့။
Related Article >>> လကျဆောငျပေးတတျသူ အမြိုးအစား (၆)မြိုး
ရိုမနျ့ဈကွိုကျတဲ့ ခဈြသူကိုတော့ အလှဆုံး ပနျးစညျးလေး လကျဆောငျပေးလိုကျပါ။ ဒါမှမဟုတျ
သူနဲ့ကိုယျ့ပုံလေးတှကေို ထုတျပွီး စာအုပျလှလှလေးမှာကပျ၊ အမှတျတရရှိခဲ့တဲ့ ပုံလေးတှရေဲ့အောကျမှာ စာသားလေးတှကေို လှလှလေးရေးပွီး ပေးလညျးရပါတယျ။ (စာအုပျလှလှလေးတှေ ဘယျမှာဝယျရမှနျးမသိရငျ လှညျးတနျးက D-mate ဆိုငျမှာ ဝယျလို့ရပါတယျလို့။)
ဒါမှမဟုတျ သူ့အတှကျ သီးသနျ့လုပျထားတဲ့ ဆှဲကွိုးလေးတှေ၊ ခုနောကျပိုငျးပျေါလာတာလေ ကြောကျတုံးပျေါမှာ ပုံလေးတှရေိုကျတာမြိုး၊ ခှကျပျေါမှာ သူ(မ)ပုံလှလှလေးတှေ ရိုကျထားတာမြိုးဆို သိပျသဘောကတြာ။
ကိုယျ့ခဈြသူကောငျမလေးက အရမျးအလုပျကွိုးစားလှနျးလို့ အလုပျတှမေတရားမြားနတေတျတဲ့သူဆိုရငျတော့ သူ(မ) အေးအေးဆေးဆေး အနားယူအပနျးဖွလေို့ရမယျ့ နရောလေးတှမှော
ဘှတျကငျလုပျပေးလိုကျပါ။ အနားယူလို့ကောငျးတဲ့ နရောတှကေတော့ ခြှေးထုတျခနျးတို့ဘာတိုပပေါ့။ ဒါမှမဟုတျလညျး Massage (အနှိပျခံလို့ကောငျးတဲ့ တဈနရောရာမှာ) ဘှတျကငျလုပျပေးလိုကျပါ။ ဒါမှမဟုတျလညျး သူ(မ) အလုပျလုပျရငျး မကျြစိညောငျးတဲ့အခါခပျဖို့ မကျြစဉျးလေး ဝယျပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ သူ(မ) ပငျပနျးတာ သကျသာစမေယျ့ အငျနာဗှနျစီဆေးဘူး (သို့)
စာမှစာဖွဈနတေဲ့ ခဈြသူကိုတော့ သူ(မ) ကွိုကျတတျတဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပျလေးတှေ ဝယျပေးပါ။ သူ(မ)မှာ ရှိမရှိတော့ အရငျဆုံး ဒိုငျလြှိုလေးစုံစမျးကွညျ့ပေါ့နျော။ ပွီးတော့ သူ(မ) လလေ့ာနတေဲ့ အကွောငျးအရာနဲ့ ဆကျစပျပွီး အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ စာအုပျမြိုး၊ ပစ်စညျးမြိုးလကျဆောငျဝယျပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ မှတျစုစာအုပျလှလှလေးဖွဈဖွဈ၊ ဘောပငျလှလှလေးတှေ၊ စာရေးကိရိယာပစ်စညျး သေးသေးလှလှလေးတှေ ထညျ့ထားတဲ့ လကျဆောငျဘူးတှေ ပေးကွညျ့ပါ။
ကဲ ယောငျးစိနျကတော့ အိုငျဒီယာလေးတှေ ပွောပွီးပွီနျော။ ကိုကိုမောငျမောငျတှကေို လကျသာတို့လိုကျတော့။
Tags: christmas, Fun, gifts, Relationship, surprise
Christina Rosy December 15, 2017